गोञ्जालोसँगै किन सकियो पेरुको क्रान्ति ? - Sisne Online
गोञ्जालोसँगै किन सकियो पेरुको क्रान्ति ?
सोभियत मोडेलको समाजवादको पतनसँगै विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको बेलामा पेरुमा नयाँ किसिमबाट सशस्त्र जनयुद्ध संचालन गरि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यमा पेरु कम्युनिष्ट पार्टी (साइनिङपाथ) ले सन् १९८१ मा ऐतिहासिक पहल ग-यो । पेरुमा संचालित जनयुद्धले छोटो अवधिमा गाउँ देखि शहर घर्ने सिद्धान्त बमोजिम केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने तहसम्म विकास गरेर सबै खाले संशोधनवादी, प्रतिक्रियावादी तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वर्गमा ठूलो भूइचालो ल्याइदियो । अनि पेरुका क्रान्तिकारी जनता, विश्वका भाइचाराहरुमा आशा र उत्साहको सञ्चार पैदा गरिदियो ।
यसको प्रभाव नेपालमा पनि निकै परेको थियो र नेपालका माओवादी क्रान्तिकारीहरुले पनि “हाम्रो झण्डा पेरुमा फरर….” भने गीत समेत घनकाएका थिए । सन् १९५३ मार्च ५ तारिखका दिन रुसका नेता जोसेफ स्टालिनको निधन भयो । त्यस पश्चात सोभियत रुसम प्रतिक्रान्ति भयो । यसले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी शिविरमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पा-यो ।
यस पश्चात माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको पथप्रदर्शनमा कतिपय कम्युनिष्ट पार्टी र संगठनहरुले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुनः संगठित गर्नका लागि १९८० मा पहल शुरु गरे । फलतः १९८४ मा क्रानितकारी अन्तर्राष्ट्रियवादी आन्दोलन (रिम) को गठन हुन पुग्यो । यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आशाप्रद तथा साकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्यो ।
पेरु पश्चिम दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हो । यसको दक्षिण प्रशान्त महासागरसँग सिमा जोडिएको छ । यो चिली र इक्वेडरको बिचमा पर्दछ । यसको क्षेत्रफल १२८५२२० वर्ग किलोमिटर छ । यसको जनसंख्या करीब ३० करोड छ । यसको राजधानी लिमा हो । सन् १९८० को दशकमा पेरु कम्युनिष्ट पार्टी (साइनिङ पाथ) का अध्यक्ष गोन्जालोको नेतृत्वमा संचालित जनयुद्धले पेरुमा एकैदम छिटो विकास ग-यो । गाउँदेखि शहर घेर्ने रणनीति अन्तर्गत त्यस जनयुद्धले राजधानी लिमा सहित तीनवटा मुख्य शहर र अन्य गावैगाउले भरिएको पेरुमा जनयुद्धले सम्पूर्ण पहाडी गाउहरु र दुइवटा शहरहरुसमेत कब्जा गरेर राजधानी लिमा कब्जा गर्न चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने सम्मको विकास गरि सकेर केन्द्रीय सत्ता कब्जाको नजिक पुगि सकेको थियो ।
यसैक्रममा सन् १९९२ सेप्टेम्बर १२ तारिखका दिन राजधानी लिमा शहरको एक घरबाट अमेरिकी पिठ्यू प्रतिक्रियावादी फुजीमोरी सरकारले गोन्जालोलाई गिरफ्तार गरेर एक सैनिक जेलमा थुनेर आजीवन कारावासको सजाय सुनायो । गिरफ्तारीको २९ बर्षपछि उहाँको जेलमै निधन भएको छ । गोन्जालोको गिरफतारी पछि पेरु कम्युनिष्ट पार्टी (साइनिङपाथ) का दोस्रो र तेस्रो तहसम्मका नेताहरुलाई तत्कालिन प्रतिक्रियावादी फुजीमोरी सरकारले गिरफ्तार गरेर जेलमा थुन्यो । देशव्यापी रुपमा भीषण दमनचक्र चलाइयो । सन् १९८१ बाट शुरु गरिएको पेरुको जनयुद्धले सन् १९९५ सम्म केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरि सक्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको थियो ।
सशस्त्र जनयुद्धद्वारा सत्ता कब्जा गरि ग्रामीण इलाका हुदै शहरी इलाका घेराउ गरि केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने कमरेड गोन्जालोको रणनीति थियो । उहाँ कर्मठ, साहसी, जुझारु सिद्धान्तकार र क्रान्तिकारी योद्धा हुनुहुन्छ । पेरु कम्युनिष्ट पार्टी (साइनिङपाथ) ले गोन्जालो विचारधारालाई स्वीकार गरेको थियो । कमरेड गोन्जालो जोखिमसँग जुझ्न सधै तयार रहने र सर्वहारावर्गको विजय निश्चित हुनेमा विश्वस्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो ।
कमरेड गोन्जालोको गिरफ्तारी पछि उहाँको जीवनरक्षाको निम्ति संसारभरका क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु र मानवअधिकारवादीहरुले विरोध जनाएर एक्यबद्धता जनाएका थिए । नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, मानवअधिकारवादी वकिलहरुले समेत विरोध जुलुस निकाले कमरेड गोन्जालोको जीवन रक्षाको माग गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
पेरुमा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरेर सर्वहारावर्गले सत्ता हातमा लिने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा कमरेड गोन्जालोलाई तत्कालिनी गिरफ्तार गरेर साइनिङपाथले सञ्चालन गरिरहेको सशस्त्र जनयुद्धलाई तहस नहस पार्ने उद्देश्य तत्कालिन अमेरिकी पिठ्यू फुजीमोरी सरकारले सोचेको थियो । गोन्जालोको गिरफ्तारीले त्यहाँको जनयुद्धलाई ठूलो घाटा भयो । नयाँ जनवादी क्रान्तिले गंभीर प्रकारको धक्का त व्यहोर्नु प-यो । यो वास्तविकता हो । तर पनि पेरुको जनयुद्ध समाप्त भएको छैन । मन्दरुपमा पेरुमा जनयुद्ध जारी छ । पेरुको परिघटनाबाट संसारभरका क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले शिक्षा लिन जरुरी छ । र अहिले पेरुमा वास्तविक रुपमा के भइराखेको छ ? क्रान्तिकारीहरुको अवस्था के छ ? त्यहाँको क्रान्तिको भविष्य कस्तो छ ? आदि बारेमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान र संश्लेषणको खाँचो छ ।